Ohatrinona ny vidim-piainana any Aostralia?
Enga anie 4, 2022 Shubham Sharma Aostralia, ny vola
Raha jerena ny anton-javatra rehetra, ny salanisan'ny vidim-piainana any Aostralia dia eo amin'ny 35,000 na 40,000 dolara Aostraliana (AUD) isan-taona. Ny vidin'ny fiainana any Aostralia dia iray amin'ireo fanontaniana karohina indrindra amin'ny Internet. Ny vidiny antonony
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'i Aostralia?
Aprily 18, 2022 Demi Aostralia, visa
Ahoana ny fomba hahitana trano fonenana any Aostralia?
March 31, 2022 Demi Aostralia, trano
Raha te hahita trano any Aostralia ianao dia afaka manomboka amin'ny vavahadin-tserasera toa ny Realestate.com.au na Flatmates. Afaka mitady vondrona Facebook momba ny trano fonenana any Aostralia ianao. Anontanio ny namana sy ny olom-pantany. Raha any Aostralia ianao dia jereo ny doka voasokajy ao amin'ny vondrom-piarahamonina
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any Aostralia? Mpitsoa-ponenana any Aostralia
March 29, 2022 Shubham Sharma Aostralia, mpitsoa-ponenana
Azonao atao ny mangataka fialokalofana any Aostralia amin'ny serivisy fifindra-monina any Aostralia. Raha tsy any Aostralia ianao dia afaka mangataka any amin'ny biraon'ny UNHCR akaiky anao. Mila asehonao fa tsy azo antoka ianao
Ohatrinona ny saran'ny dia mankany Aostralia?
Janoary 22, 2022 Demi Aostralia, ny vola, Travel
Rehefa tonga any Aostralia ianao dia mahazo doka amin'ny sticker rehetra. Hitanao ny fandaniana amin'ny zavatra. Ary milatsaka ny valanoranonao. Indraindray ny Aostralianina dia mahatsapa fahatairana amin'ny sticker ary mipetraka any izy ireo. Midina haingana ny tetibolany ny mpandeha. Satria tsy misy manantena mihitsy
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Aostralia? Torolàlana haingana ho an'ny vahiny sy Aostraliana
Janoary 14, 2022 Demi Aostralia, asa
Amin'izao tontolo ankehitriny izao, ny fitadiavana asa dia zara raha zavatra hatao. Asa, asa na asa no andraikitry ny olona eo amin'ny fiaraha-monina. Mampiavaka azy ireo amin'ny hafa izany. Ny asa dia asa andehananao